Ngaphambili, abesifazane abaningi baphupha ukuba nomntwana, kodwa yayingakwazi ngenxa yesizathu esithile. Yiqiniso, leli qiniso ayikwazanga ukwamukela futhi abazali abangazange okwamanje ukwazi nomuzwa omkhulu ngumama noma ngubaba noma ososayensi abafuna ukuthola impendulo noma yimuphi umbuzo. Muva nje, imibhangqwana ezingasho bayahlupheka inkinga engenakwenzeka lokukhulelwa ingane ngokwemvelo. Lokhu kungenxa yezizathu eziningi, ezivame kakhulu okuyinto abazali Rhesus ukungqubuzana lapho amaprotheni uyise beqonda umzimba female njengoba into evela.
Ukusiza ukuthi imibhangqwana enjalo iye yasungula sokukhulelwa eco, okungukuthi, ngaphandle kwesibeletho fertilization, ibizwa ngokuthi "ukukhulelwa okwenziwa ngaphandle kwesibeletho sokukhulelwa." Lobu buchwepheshe isetjentiswe emazweni amaningi athuthukile ngempumelelo. Kusekelwe yokuthi isidoda besilisa ivundisa Iqanda owesifazane ezimweni laboratory inzalo ngokuphelele. Khona-ke iqanda kakade kuqedile kabusha esibelethweni, futhi uzoqhubeka zincike ikhono umzimba ukwamukela umbungu.
Eco ekhulelwe ithuba kuphela abesifazane abaphethwe ukungazali, ngoba ngokwemvelo ayakhulelwa ngeke aphumelele. Noma yimuphi umbandela evimbela owesifazane ebamba, kungenzeka ukuhlonza kanye unqobe ngosizo kwesibeletho fertilization. Uma indoda ambalwa ayiphumelelanga, ohlongozwayo amasevisi abanikelayo. Kulokhu, lo dokotela ikhetha indlela ukukhulelwa, ngokuhambisana izinkinga ezikhona kanye pathologies.
Stage kwesibeletho fertilization:
Uhlolo kuqala kwenziwe, akunakwenzeka ukuba kutholakale imbangela yokushona nje ebamba isisu. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo ngizodabula bobabili abashadile. Ngemva ekutholeni imbangela, khetha indlela sokukhulelwa, futhi odokotela lihamba esenzweni ngqo. Ukuze Eco kamuva sokukhulelwa kuqinisekisiwe, kubalulekile ukuba uqaphe futhi ngokucacile zonke izinyathelo. Ngosuku umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi yesibili babelwa amalungiselelo hormone ukuthola 10 amaqanda avuthwa ngesikhathi esisodwa. Ngosizo ultrasound njalo uchwepheshe uqaphe isimo follicle. nokuvuthwa yabo egcwele iqanda kubonisa ukuzimisela, okuyinto equkethwe kuwo, zalisa.
Ngesikhathi sigaba esilandelayo ukuhlinzwa mini kokususwa follicle. It wenziwa khona ngaphansi ukubulawa kwezinzwa okuvamile futhi kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-5. Ukuze follicle kusetshenziswa inaliti esihle, okuyinto ibhoboze odongeni sangasese. Owesifazane engazizwa ubuhlungu, kodwa ngemva 3 kuphela amahora usungaya ekhaya. Ngesikhathi esifanayo indoda okufanele idlule isidoda. Uma kukhona ubunzima kulokhu, ochwepheshe ekhishwe amaprotheni kusukela iqanda.
Ngesikhathi esigabeni sesithathu, umhlangano we isidoda neqanda ngaphandle kwesibeletho kanye kokukhulelwa zabo ngokuphelele. Zitshala umbungu esibelethweni Kwenziwa kungakapheli imizuzu, nge zazingekho izinto zokubulala izinzwa noma analgesia liyadingeka, kusukela msebenzi ngempela azinakwa. Ubuningi 2 amahora ngemva kowesifazane uhambe ekhaya.
Kodwa ngala ukulinda isikhathi eside eyisicefe iqala. Izithandani bahlushwe umbuzo ukuthi ukukhulelwa ngemuva IVF, indlela uyigcine? Ngenxa yalesi owesifazane ukuphuza imithi ethile nge wokuqukethwe lelisetulu-hormone, kanye sasesiqhutshelwa eco sokukhulelwa test. Kakade 2 amaviki ngemuva kokuhlinzwa zokugcina kwenziwe ukuhlolwa igazi. Uma umphumela omuhle ke ejenti hormone kufanele kuthatha cishe izinyanga ezingu-3.
Isikhathi esining impela emva IVF sokukhulelwa unika kabili yalokho, okungukuthi, ukukhulelwa uphendulela kwande. Kodwa ngokuvamile uzame ukushiya umbungu owodwa kuphela. Lokhu kwenziwa ukuze nikwazi umzimba ukuqinisekisa ukuthuthukiswa evamile fetus.
6 ngesonto yokukhulelwa kusukela ekuhlaleni kwesisu: okwenzekayo? 6 ngesonto yokukhulelwa kusukela ekuhlaleni kwesisu: umuzwa, ubukhulu fetus, imisindo ephansi, isithombe
Trendy bob side nge esiphongweni